Adora & etc.: နောက်ကျနေသော အိတ်တလုံး (တဂ်ပို့စ်)
Posted by Adora etc. at 21:08
သက်ဝေ 27 August 2013 at 21:50
ဟားဟား... ကြည့်... အခုလို သွန်ချလိုက်တော့ အများကြီး ထွက်လာရော မဟုတ်လား... အသုံးမလိုတာတွေကို သတိထားပြီး လျှော့ပစ် ညီမ... တလေးတလံကြီး ထမ်းပိုးမထားနဲ့...
Tag Post လေး ရေးပေးတာ ကျေးဇူးတင် ချစ်ခင်... <3
Adora etc. 27 August 2013 at 23:08
ခုလို သတိတရလာလည်တဲ့ မမကိုလဲကျေးဇူးတင်ချစ်ခင် xoxo
အမ်တီအန် 28 August 2013 at 03:12
အို..အိတ်ထဲ ထည့်ထားတာ အများကြီးပါလား...ညီမရေ..
တို့တွေ မိန်းမသားဆိုတာက ...
နှမျောလို့... လိုရင်သုံးဖို့နဲ့ အိတ်ထဲ များနေတာ...သတိမပြုမိကြဖူး...
အခု tag post လေးကြောင့် သိလာရတယ်နော်...
ညီလင်းသစ် 29 August 2013 at 12:19
အဟားဟား.. “ဒီအစ်မလောက် မများပါဘူး” နဲ့ စပြီး “အင်း.. ဒီအစ်မလို များသားပဲ” နဲ့ ပြန်ပိတ်ထားတာလေး သဘောကျသွားပြီ၊းD ဒီအစ်မလို အိုင်ပက်ကလည်း ပါသေးတာဆိုတော့ သေချာပြီ၊ အနည်းဆုံး ၃ ကီလိုခွဲပဲ...၊း)
ညီမ (ကျနော့်ထက် ငယ်မယ်ထင်လို့ ညီမလို့ပဲ ရဲရဲသုံးလိုက်ပြီ) ရဲ့ အိတ်က အကြီးကြီး ဖြစ်တဲ့အပြင် အထဲမှာလည်း အိတ်လေးတွေ ပါသေးတယ်ဆိုတော့ အိတ်ထဲက ပစ္စည်းတွေသာ အသက်ရှိမယ်ဆိုရင် သူတို့စိတ်ထဲ လှိုဏ်ဂူကြီး တစ်ခုထဲက ဝင်္ကပါထဲ ရောက်နေတယ်လို့ ထင်မှာပဲနော်၊ ဟိုတစ်ခန်းဝင် ဒီတစ်ခန်းထွက်နဲ့ လမ်းတွေဘာတွေ ပျောက်ပြီးတော့လေ....။းD
Adora etc. 29 August 2013 at 23:35
ကိုညီလင်းရေ အိတ်ကိုမချိန်ရဲဘူးရယ်။ မမသက်ဝေပြောသလို မလိုတာလေးတွေလျှော့ပြီး လိုတာလေးတွေပြန်ထဲ့လိုက်တာ အိတ်အလေးချိန်ကမထူးဘူး xP
စုချစ် 30 August 2013 at 08:03
ပုံလဲ မပါဘူး... ပုံ ပြပါ...
ရွှေအိမ်စည်မေ2September 2013 at 00:10
ပုံလေးမြင်ရရင် ပို ရင်မော..အဲလေ ပို အသက်ဝင်နေမှာပဲ :D
လင့်လည်း ယူသွားပါတယ်နော်... :)
Adora etc.2September 2013 at 01:32
မစုချစ် နဲ့ အိမ်စည်ရေ
ရှင်းပြီးသား အိတ်ပြမယ် ကြည့်မလား?းD
ရွှေအိမ်စည်မေ2September 2013 at 04:48
တဖြည်းဖြည်း ပြရင်တော့ ကြည့်မယ်
ကိုယ် ကလည်း ရင်မောတတ်တော့ :P
စုချစ်2September 2013 at 20:18
ပုံမြင်ရတာတော့ မရှုပ်ပါဘူး ညီမလေးရ... သြော်... ဒါက ရှင်းပြီးသား အိတ်လား...